Diego Simeone oo ka hadlay ciyaaryahanka u qalmay inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’or 2018 – Gool FM
Diego Simeone oo ka hadlay ciyaaryahanka u qalmay inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’or 2018
(Atletico) 04 Dis 2018. Macalinka kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa wuxuu ka hadlay ciyaaryahanka u qalmay inuu sanadkan ku guuleysto abaal marinta Ballon d’or 2018, taasoo xalay magaalada Paris loogu caleymo saaray xidiga reer Croatia ee Luka Modric.
Inkastoo Diego Simeone uusan u arkin in Luka Modric uu u qalmay inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’or 2018, hadana wuxuu u diray hambalyo.
Diego Simeone ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay Copa del Rey kula ciyaari doonaan kooxda Sant Andreu, wuxuuna ka hadlay dhowr arimood.
“Waan u hambalyeynayaa Luka Modric, kaasoo xilli ciyaareed cajiib ah ku qaatay kooxda Real Madrid iyo xulkiisa Croatia”.
“Lakiin aniga ahaan waxay ila tahay in abaalmarinta Ballon d ‘Or 2018 shaki la’aan ay ku xaq lahaayeen midkood xidigaha Raphaël Varane ama Antoine Griezmann”.
Simeone ayaa si gaar ah kaga hadlay laacibkiisa Antoine Griezmann kadib markii uu Luka Modric ku guuleystay abaal marinta Ballon d’or
“Hadii aan ku sugnaan lahaa booska Antoine Griezmann, waan ku farxi lahaa waxa igu dhacay sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu ahaa geesi, sababtoo ah wuxuu kula soo guuleestay xulkiisa France koobka aduunka, halka kooxdiisa Atletico Madrid uu lasoo qaaday UEFA Europa League iyo UEFA Super Cup”.
“Saddexdan kooxood ayay Juventus kula dagaalami doontaa tartanka Champions League” - Pjanic